မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၄ ရက် နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ "ကျည်ဆံတွေ အစား ပန်းများပွင့်စေ ငါတို့ချစ်တဲ့ မြန်မာပြေ" “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၄ ရက် နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ "ကျည်ဆံတွေ အစား ပန်းများပွင့်စေ ငါတို့ချစ်တဲ့ မြန်မာပြေ"
Rock singer Aung La and his band Reason support our Peace Campaign by wearing T- Shirts which was written "Let The Flowers Bloom, But Not Bullets." in their Live Concert on Valentine's Day.
Please see the photos in attached files. And we also would like to share
a poem of one of Generation Wave member.
" ကျည်ဆံတွေအစား ပန်းများပွင့်စေ "
သေသူတွေက ရွက်ဆိုပြတဲ့ အခါ
ဖိနပ်ပေါက်နေတဲ့ ခြေထောက်တွေ အတွက်
ကျောအောင့်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက်
မိမဲ့ဖမဲ့ လူမမယ်လေးတွေ အတွက်
နာဖျားခဲ့ရ ဘ၀တွေ အတွက်
သားသမီး ပျောက်သွားတဲ့ မိဘတွေ အတွက်
အနာဂတ်ရေစိုးသွားတဲ့ သားသမီးတွေ အတွက်
ကျနော် ငိုနေပြီ မေမေ
ကျည်ဆံတွေအစား ပန်းများပွင့်ပါစေ မေမေ....။
Posted by ဒီရေ at 9:24 AM
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၄ ရက် နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ "ကျည်ဆံတွေ အစာ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အပေါ် အီးယူတုံ့ပြန်မည်